Jidadkiisa oo dhammu waa in la soo celiyo maktabadda Lugood
Si shakhsi in uu noqdo in la soo celiyo maktabadaha Lugood waa in gurmad ah oo ka kooban karin. Waxaa jira meelo badan oo user a maktabadda Lugood gurmad, laakiin doorashada noqon kartaa waa waxa ugu sahlan iyaga. Meelaha ugu badan ee qofka maktabadda dib kartaa yihiin; si ah drive dibadda u adag, in computer kale iyo in ay qalab macruufka ah. Doorasho kasta ku urursan doonaa xogta ay ilaa iyo markii ay mar kale u baahan doontaa inaad nuqul in ay maktabadda Lugood.
Soo Celinta ka qalabka macruufka
Kombiyuutar anther la Wonder share TunesGo Soo Celinta maktabadda Lugood
Soo Celinta maktabadda Lugood celin ka External Hard Drive
Waxaad u baahan doontaa in aad codsi kale oo saddexaad oo sahli doonto in la soo celiyo maktabadaha aad sida TunesGo. Waxay u sahlaysaa in aad si fudud loo soo celiyo maktabadda Lugood adiga oo aan dhaqdhaqaaqa ah.
Connect qalab aad iyo abuurtaan TunesGo ah, ka dib markii qalab aad la ogaado waxaa lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala TunesGo ah.
Farriin ka muuqan doontaa sheegaya in dhamaan aad gabayo playlist ah waxaa loo wareejin doonaa maktabadda Lugood hayo qaabab sida ratings iyo play soo oogay. Waxaa laga rabaa in aad doonaa oo kaliya in ay doortaan bilowga iyo hannaanka bilaabi doonaan.
Kombiyuutar anther la TunesGo Wondershare Soo Celinta maktabadda Lugood
Talaabada 1: .Download iyo rakibi TunesGo si aad u computer xiro qalabka si aad u computer iyo ka dib markii qalabka la ogaado daaqad ka soo muuqan doonaa.
Talaabada 2: .Ugu bidix ee suuqa waxaa jiri doona menu ah ku soo bixi doona, dooro playlist iyo dooran playlist in aad rabto in la soo celiyo.
Talaabada 3: .Kadib xulashada playlist aad rabto in aad soo celin guji dhoofinta in markaas a bar menu kooxda ka muuqan doontaa inay u dhoofiyaan si Lugood. Faylasha ayaa loo soo celiyo doonaa si la qaab asalka waxaa jiray markii hore.
Si user a si loo soo celiyo maktabadda Lugood ka drive dibadda waa in uu yeelan hore wuxuu lahaa gurmad ah goobta. Waxaa jira tallabooyin in loo baahan yahay marka mid loo baahan yahay in la abuuro gurmad ah talaabooyinka soo socda ayaa la raacayaa:
Talaabada 1: Dooro drive dibadda inay u dhaqmaan sida aad gurmad.
Talaabada 2: . Raadi Lugood soo bandhigista computer aad, haddii folder Lugood ma aha doorashada default xulan Lugood markaas doorashada, waxaana ku xiga goobaha sare sanduuqa wada hadal ah ka soo muuqan doonaa.
Talaabada 3: . Jiid oo hoos u playlist ama folder in aad rabto in aad raad ugu horeysay.
Talaabada 4: . Ka dib markii koobiyeynta waa guul ka dibna gal doona ayaa la xoojiyaa. Iyada oo ay goobjoog ka ahaayeen gurmad ah oo ku saabsan baabuur dibadda adag user a hadda soo celin karaa maktabadaha Lugood ka drive si fudud oo aan laga badinin wixii xog ah.
Laga soo bilaabo wadid aad dibadda aad xulan doonaa galka taageeray in markii hore ay soo guuriyeen. Jiid gal ah in drive gudaha iyadoo ay fure u wareejin ama ikhtiyaarka oo fariin u muuqan doonaa:
Dooro gal ah in aad ka drive dibadda guuriyeen gal. Riix furaha daaqadaha ka dibna doortay maktabadda Lugood gudaha galka. Soo celinta content ka ah drive dibadda adag waa hawl fudud tan iyo markii la ma laha hab-dheer.
Sida loo kaabta Lugood playlist
Waxaa suurtagal ah in dib Lugood in iCloud
Meeh Location Lugood playlist?
> Resource > Lugood > jidadkiisa oo dhammu waa in la soo celiyo maktabadda Lugood